ဆေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဓာတ်လိုက် သေဆုံးမှုအတွက် တာဝန်ခံမှုနှင့် အရေးယူမှုရှိရန် သမဂ္ဂတောင်းဆု - Yangon Media Group
ဆေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဓာတ်လိုက် သေဆုံးမှုအတွက် တာဝန်ခံမှုနှင့် အရေးယူမှုရှိရန် သမဂ္ဂတောင်းဆု
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၇
ဆေးတက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား ဓာတ်လိုက်သေဆုံးမှုအတွက် တာဝန်ရှိသူတို့အနေဖြင့် ထိုက်တန်သောတာဝန်ခံမှု၊ အရေးယူမှု၊ တရားမျှတမှုရှိစေရန် ဆေးတက္ကသိုလ်-၂ (ရန်ကုန်)၊ ကျောင်းသားများသမဂ္ဂမှ တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ဆေးတက္ကသိုလ်-၂ (ရန်ကုန်)၊ ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ၏ တရား ဝင် Page မှ ဇူလိုင် ၂၆ ရက်၊ ည ၁၁ နာရီခွဲကျော် ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ယင်းကဲ့သို့ တောင်းဆိုထား ခြင်းဖြစ်သည်။
ဇူလိုင် ၂၆ ရက်က ဆေးတက္ကသိုလ်-၂ (ရန်ကုန်)မှ နောက်ဆုံးနှစ် အပိုင်း(ခ) ကျောင်းသား ကိုထွဋ်မျိုးလွင် ရုတ်တရက်ကွယ် လွန်သွားခြင်းသည် မိဘတို့အတွက် သားကောင်းတစ်ယောက်၊ နိုင်ငံ တော်အတွက် ပညာရှင် ဆရာဝန် လောင်းတစ်ယောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ညီအစ်ကို မိတ်ဆွေ ကောင်းတစ်ယောက်ဆုံးရှုံးရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ယင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
ထိုသို့သော နစ်နာကြေကွဲရခြင်းသည် သက်ဆိုင်ရာကစားကွင်းမှ တာဝန်ရှိသူများ၏ လုံခြုံ ရေးဆိုင်ရာ ပေါ့လျော့အားနည်းမှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနှင့် ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပို ရေးရှင်း၏ အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သောအစိုးရ ပုဂ္ဂလိက နေရာများနှင့် အများပြည်သူလုံခြုံ ရေးအတွက် လိုအပ်သော စီမံခန့် ခွဲမှု၊ စိစစ်မှု၊ စစ်ဆေးမှု၊ တာဝန်ယူမှု အားနည်းခြင်းတို့ကြောင့်လည်းကောင်း ဖြစ်ပွားရသည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသည်။
အလားတူဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးမျိုး မကြာသေးမီကပင် ရန်ကုန်မြို့တွင်း၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းဖြစ်ရပ်များသည် အများပြည်သူတို့၏ ဘဝလုံခြုံမှုကို ခြိမ်းခြောက် နေခြင်းလည်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကုန်ဆုံးခဲ့ရသည့် အသက်တိုင်းသည် နိုင်ငံ တော်အတွက် ဆုံးရှုံးမှုချည်းသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဤ ဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီး၏ တာဝန်ရှိသူတို့အား ထိုက်တန်သော တာဝန်ခံမှု၊ အရေးယူမှု၊ တရားမျှတမှုရရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဆေးတက္ကသိုလ်-၂(ရန်ကုန်) ကျောင်း သားများသမဂ္ဂမှ တောင်းဆို လိုက်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ်-၂(ရန်ကုန်) ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ကိုဟန်ဇင်ဖြိုးက ”အဓိက တော့ ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်လောက်ထိ ဗခအငသည ပြန်ပေး နိုင်မလဲသိချင်တာပါ။ တာဝန်ယူမှုပေါ့။ ကြေညာချက်လည်း ထုတ် ပြန်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီ ကြေညာချက်ကို အစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုစောင့်ကြည့်မလဲဆိုတာကို လိုချင်ပါတယ်။ တစ်ခုခုတော့ တုံ့ပြန်စေချင်တာပေါ့။ သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ။နောက်ဒီတစ်ခုတည်းကို မူတည် စေချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့ တတိယကြိမ်လောက်ဖြစ် နေပြီ။ ဒါကိုပဲ ဒီအတိုင်းထားတော့မှာလား။ ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲ။အဲလိုမျိုး မူတည်စေချင်တယ်။ကျောင်းသားမဟုတ်ဘဲ အခြား ပြည်သူတစ်ယောက်ဆို ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်နေဦးမှာလဲ”ဟု ဒီမိုကရေ စီတူဒေးသို့ ဇူလိုင် ၂၇ ရက်က ပြောသည်။
သေဆုံးသူကျောင်းသားမှာ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက် ၂၁ နှစ်သာရှိသေးပြီး ဇာတိမှာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဒိုက်ဦးမြို့နယ် ကျိုက်စကောကျေးရွာဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်း၏ မိဘဆန္ဒအရ ရုပ်အလောင်းကို ဇာတိသို့ ဇူလိုင် ၂၆ ရက်၊ ညပိုင်းက ပြန်လည်သယ်ဆောင်သွားပြီး ဇူလိုင် ၂၈ ရက်တွင် သင်္ဂြုဟ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ¤င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ ဖူဆန်တရုတ်ဘုံကျောင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမွန်ကျင်းက ”အကုန်လုံး အစအဆုံး တာဝန်ယူပြီး ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။ နာရေး ကိစ္စအဝဝကို ကျွန်တော်တို့ဘက်က ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။ ၂၉ ရက်မှာ ဒိုက်ဦးကို လိုက်သွားမယ်။ ၇ ရက် ရက်လည်အတွက် တာဝန်ယူပြီးတော့ ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုပါ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ကျေနပ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။ သူတို့ ဆန္ဒကို ကြိုးစားပြီးတော့ ဘုရားကျောင်းအနေနဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေးမှာပါ”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဇူလိုင် ၂၇ ရက်က ပြောသည်။
ဓာတ်လိုက်သေဆုံးခဲ့ခြင်းမှာ အမှတ်မထင်ဖြစ်သွားခြင်းဖြစ် ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ ”မိုးကလည်းရွာ၊ ပန်ကာကို သွားဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ ဓာတ်ကြိုးက မကောင်းတော့ နောက်ကနေ ကာရံထားတဲ့ သံပန်းကို ဓာတ်စီးသွားတာပေါ့”ဟု ၎င်းက ပြော ကြားခဲ့သည်။ အခင်းဖြစ်ပြီးနောက် ဖူဆန် အားကစားရုံကို ပိတ်ထားလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ပန်ကာများပြုပြင်ပြီး လုံခြုံရေးစိတ်ချရမည့် အချိန်မှပြန်ဖွင့်ရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဆရာစံရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်မောင်အေးက ပြောသည်။ ဖူဆန်အားကစားရုံတွင် ဘတ်စကက်ဘောကစားခြင်းအပြင် ဘုရားပွဲ၊ မိတ်ဆုံစားပွဲ၊ ဟောပြော ပွဲများလည်း ပြုလုပ်ကြောင်း၊ အ ခြားအားကစားနည်းများ ပြုလုပ်ချင်ပါကလည်း ငှားရမ်းပေး ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ဗဟန်းမြို့နယ် ဆရာစံရပ်ကွက် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း မြန်မာပလာဇာဘေးရှိ ဖူဆန်တရုတ်ဘုံ ကျောင်းဝင်းထဲရှိ ဖူဆန်အားကစားရုံ ဘတ်စကက်ဘောကွင်း အတွင်း ဇူလိုင် ၂၆ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့်က သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ ဘတ်စကက်ဘော ကစား နေသည့် ရန်ကုန်ဆေးတက္ကသိုလ် (၂) နောက်ဆုံးနှစ် အပိုင်း(ခ) ကျောင်းသား ကိုထွဋ်မျိုးလွင်သည် ကွင်းထဲရှိ လျှပ်စစ်စီးဝင်နေသည့် ခြံစည်းရိုး သံပန်းအားမှီ လိုက်ရာမှ ဓာတ်လိုက်ခံရပြီး ¤င်း အား ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်စဉ် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဗဟန်းမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင် မြတ်ကျော်က ပြောသည်။ ဓာတ်လိုက်သေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရဲစခန်းတွင် သေမှုသေခင်း အမှတ်စဉ် (၁၆/၂ဝ၁၈) ဖွင့်လှစ်ပြီး ဓမ္မတာအတိုင်း သေဆုံး ခြင်း ဟုတ်၊ မဟုတ် စစ်ဆေးနေ ကြောင်း ဗဟန်းမြို့မရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ ”သေမှုသေခင်းဖွင့်ပြီးတော့ စစ်ဆေးနေတယ်။ အခြား အရေးယူတာတွေ မရှိသေးဘူး။ အခုက ဒီအချိန်မှာ ဘာမှလုပ်လို့ မရသေးဘူး။ အခုက အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ စစ်ဆေးဆဲပဲ။ တရားစွဲတာတွေလည်း မရှိသေးဘူး” ဟု ၎င်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဇူလိုင် ၂၇ ရက်တွင် ပြောသည်။
အပစ်ရပ် လက်မှတ် မထိုးအဖွဲ့များ မပါဝင်ဘဲ ပြီးပြည့်စုံသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး မဖြစ်နိုင် ဟုဆို
မန္တလေးမြို့ရှိ တိုက်ခန်း တစ်ခန်းအတွင်း လူသတ်မှုဖြစ်ပွားပြီး ခုနစ်နာရီခန့် အတွင်း ပြစ်မှု ကျ??
တောင်ဆူဒန် ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် ဆူဒန် ကလေးငယ်များ အစာအာဟာရ မပြည့်ဝမှု၊ ငတ်မွတ်မှု၊ ကျောင်းထွ??
VAR အသုံးမပြုခြင်းကို နားမလည်ကြောင်း မန်စီးတီးအသင်းနည်းပြ ဂွါဒီယိုလာ ဆို